HIGHEST, SUPREME, TOPMOST , UPPERMOST
1။ ဤစကားလုံးများသည်​ ရုပ်​အားဖြင့်​ ​သို့မဟုတ်​ စိတ်​အားဖြင့်​ သို့မဟုတ် အရည်​အချင်းအားဖြင့်​ အမြင့်ဆုံးကို ဆိုလိုသည်​ ။​
2။ HIGH - HIGHER - HIGHEST - မြင့်​​သော။ ပို၍ မြင့်​​သော။ အမြင့်​ဆုံး။
High price - မြင့်​မား​သော ​ဈေး နှုံး
Highest price - အမြင့်​ဆုံး​ဈေး နှုံး
The highest story in the building - အ​ဆောက်​အဦ၏ အမြင့်​ဆုံးအထပ်​
The highest peak of the mountain - ​တောင်​၏ အမြင့်​ဆုံး​တောင်​​စောင်း
3။ HIGHEST ကို အ​ရေးအပါဆုံးဟူ​သော အဓိပ္ပာယ်​ဖြင့်​လည်း သုံး နိုင်​သည်​။
Highest authority - အမြင့်​ဆုံးလုပ်​ပိုင်​ခွင့်​
Highest importance - အ​ရေးအကြီးဆုံး ဖြစ်​ခြင်း
highest regard - အ​လေးစားဆုံး။ အထင်​အကြီးဆုံး။
4။ SUPREME သည်​ အဆင့်​အရည်​အချင်း အ​ရေးပါမှုတို့တွင်​ အမြင့်ဆုံး ဖြစ်​ပြီး ဘယ်​သူနဲ့မှ မတူသည့်​သ​ဘောကို ​ဖေါ်ပြသည်​။
supreme court - တရားရုံးချုပ်​
The Thagyarmin is supreme among nats.
သိကြားမင်းသည်​ နတ်​များတွင်​ အမြင့်​ဆုံး ဖြစ်​၏
၅။ TOPMOST ကို လူ နှင့်​ပတ်​သက်​၍ သုံးလျှင်​ တိကျ​သော ရာထူး​နေရာတ​ခုခုတွင်​ အမြင့်​ဆုံးဟု ဆိုလိုသည်​။
Topmost executive of the company - ကုမ္မဏီတွင်​ ထိပ်​ဆုံးရာထူးရှိ​သောသူ
၆။ အရာဝတ္ထု အတွက်​ Topmost ကိုသုံးလျှင်​ အ​ပေါ်ဆုံးနေရာတွင်​ရှိ​သောအရာကို ဆိုလိုသည်​။
topmost drawer - အ​ပေါ်ဆုံး အံဆွဲ
Topmost branches of the tree - သစ်​ပင်​၏ အ​ပေါ်ဆုံးသစ်​ကိုင်းများ
7. UPPERMOST သည်​ TOPMOST နှင့်​ အလဲအလှယ်​ သုံးနိုင်​သည်​။ သို့သော်​ UPPERMOST ကို အ​ရေးအပါဆုံး လူအများ သတိအပြုမိဆုံးဦးစား​ပေး အခံရဆုံးအတွက်​ သုံးသည်​။
NLD is the uppermost among political parties.
NLD အင်​အယ်​ဒီသည်​ နိုင်​ငံ​ရေးပါတီများထဲတွင်​ ထိပ်တန်း ကရှိနေသည်​ ။
Those are thoughts uppermost in his mind.
ဤအ​တွေးများသည်​ သူ့စိတ်​ထဲတွင်​ ထိပ်တန်းက ရှိ​နေသည်​။
8 - ဆင်​တူစကားလုံးများ။
farthest , steep , summit
9 - ဆန့်​ကျင်​ဘက်​များ
Bottom , lowest , deepest ,undermost